FIFANDRAISANA SY FIFAMPIZARANA :: Nametra-pialana ny filoha lefitry ny UCTU • AoRaha
FIFANDRAISANA SY FIFAMPIZARANA Nametra-pialana ny filoha lefitry ny UCTU
Nandray fanapahan-kevitra. Nametra-pialana ny filoha lefitry ny Vondrom-pitaterana eto an-drenivohitra na ny UCTU, Rakotonirina Jean Louis Emile, omaly.
Niroso tamin’ity fanapahan- kevitra ity ny tenany noho ny olana nisesisesy momba ny fitaterana teto Antananarivo renivohitra sy ny fepetra noraisin’ny kaoperativa sasany mpikambana ao anatin’ity vondrom-pitaterana ity na dia nisy aza ny zavatra tapaka nandritra ny fivoriambe izay notanterahan’ izy ireo.
Anisan’izany ny fampi- akarana ny saran-dalana ho 500 ariary izay nataon’ireo kaoperativa sasantsasany. Efa nanambara ity filohan’ny kaoperativa Tselatra ity fa tsy tokony hiroso avy hatrany amin’ ny fampiakarana saran-dalana izy ireo fa mila mampiomana ny mpanjifa aloha. Nisy ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro izay napetrak’izy ireo taorian’io fivoriam-ben’ny UCTU io. “Misy ireo olona izay minia tsy manaraka ny fitsipika efa nifanekena nandritra izany”, hoy izy.
Nomarihina kosa fa mbola hanohy ny fitantanana ny kaoperativa Tselatra ny tenany. Hotazonin’izy ireo ny saran-dalana tokana 400 ariary, taorian’ny fivorian’ ireo mpitatitra sy ny mpitantana. Fanazarana ny mpandeha handoa saran-dalana tokana izany fanapahan-kevitra izany mba hialana amin’ny tapa-dalana 200 sy 300 ariary.
ADINA ARA-PANATANJAHANTENA BEPC :: Maro ireo mpitsabo niala an-daharana amin’ny fanaraha-maso ny mpiadina